१२४७.३५ विन्दुमा नेप्से, ५९ करोड बराबरको शेयर कारोबार, कारोबार शुरु भएको पहिलो दिन नै इन्फीनिटीको शेयरमूल्यमा सर्किट | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण १२४७.३५ विन्दुमा नेप्से, ५९ करोड बराबरको शेयर कारोबार, कारोबार शुरु भएको पहिलो दिन नै इन्फीनिटीको शेयरमूल्यमा सर्किट
on: July 08, 2019 नेप्से विश्लेषण, लगानी
१२४७.३५ विन्दुमा नेप्से, ५९ करोड बराबरको शेयर कारोबार, कारोबार शुरु भएको पहिलो दिन नै इन्फीनिटीको शेयरमूल्यमा सर्किट
असार २३, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से परिसूचक ८ दशमलव ७० अंक घटेर १ हजार २४७ दशमलव ३५ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार २५६ दशमलव १२ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक शुरु भएको १५ मिनेटको अवधिमा बढेर १ हजार २५७ दशमलव ५७ विन्दु सम्म पुगेको थियो । सो विन्दु पश्चात निरन्तर घटेको नेप्से कारोबारको अन्त्य तिर घटबढ हुँदै अन्तमा शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ ।
सोमवार नेप्सेमा इन्फीनिटी लघुवित्तको पहिलो कारोबारको लागि रू. १०३ दशमलव ८१ देखी ३११ दशमलव ४३ सम्म मूल्य रेञ्ज तोकेसँगै शुरु भएको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । बजारमा अल्पकालिन लगानीकर्ताले थोरै फाइदा उठाउने क्रमसँगै यसदिन घटेको बजारमा कारोबार रकम भने धेरै देखिन्छ ।
सोमवार कारोबार अवधिभर ११ समूहको परिसूचकमा जलविद्युत समूह र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से परिसूचक घट्न गएको हो । शेयरमूल्य बढेको शिर्ष १० कम्पनीहरुमध्ये ६ कम्पनी जलविद्युत समूह अन्तर्गतका रहेकाले समग्र जलविद्युत समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २ प्रतिशत बढेको हो । यस्तै, म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत नबिल इक्वीटीको शेयरकारोबार २ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बढ्दा समग्र म्युचुअल फन्डको शेयरमूल्य बढेको हो ।
यस दिन रू. ५९ करोड १० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा रू. ५ करोड ५ लाख कम हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन १ दशमलव ५६ अंक घटेर २६८ दशमलव ७९ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबार भएका १७१ कम्पनीमा ४३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ११४ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । साथै, १४ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
सोमवारको कारोबारमा इन्फीनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । कम्पनीको यस दिन पहिलो कारोबारको लागि रू. १०३ दशमलव ८१ देखि ३११ दशमलव ४३ सम्म मूल्य रेञ्ज तोकेसँगै शुरु भएको कारोबारमा शेयरमूल्यमा रू. ३१ ले बढेपछि सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । यस्तै आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य ७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ७६ पुगेको छ । त्यस्तै, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९१ प्रतिशत घटेर नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १०५ ले घटेर रू. ९५४ मा सीमित भएको छ ।
११ समूहको परिसूचकमध्ये २ समूहको परिसूचक बढ्यो
प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको सर्वाधिक कारोबार
सोमवार एक दिनभरिको कारोबारमा प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको सर्वाधिक बढी रू. ११ करोड ४५ लाख बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको छ । कम्पनीको यस दिन अन्तिम शेयरमूल्य रू. १७१ रहेको छ । सो कम्पनीको ६ लाख ७० हजार कित्ता शेयर खरीद विक्री भएको हो । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रो स्थानमा सिभिल बैंकको रू. ३ करोड ८० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १५८ रहेको छ । कारोबार रकमको आधारमा शीर्ष १० कम्पनीहरु मध्ये अधिकांश कारोबार रकम बढी गर्ने कम्पनीहरु बैंकङ समूह अन्तर्गत रहेका छन् ।